Ulawulo oluqhelekileyo - iSuzhou Bricmaker Ukuzenzekelayo Co., Ltd.
Indawo yokusebenzela yeBricMaker
Umshini Extruder Series
Inkqubo yokuQokelela iRobot
Ukutyunyuzwa koomatshini Series
Ukuxuba Oomatshini Series
Ukondla oomatshini Series
Iprojekthi yeTunnel Kiln
Abathengi akufuneki kuphela ukuba bakhethe umboneleli ngezixhobo ezinokuthenjwa, itekhnoloji eyomeleleyo, inkonzo egqibeleleyo emva kokuthengisa kunye notshintshiselwano rhoqo lweenkonzo zobugcisa. Okubaluleke ngakumbi, ulawulo lwabo kufuneka lubekhona ukomeleza ulawulo lokuqonda, ukuzithemba.
Ukomeleza ulawulo lwezixhobo ukuqinisekisa ukusebenza kwesiqhelo kwezixhobo, ukuphucula ukusetyenziswa kwezixhobo kunye nomgangatho wokugqibelela, oku kuya kuphucula ngokuthe ngqo izalathi zobugcisa kunye nezoqoqosho zamashishini, kwandise ukusebenza kakuhle koqoqosho lwamashishini.
Ukomeleza iindleko zolawulo lwedatha, izinto ezingasetyenziswanga, ukusetyenziswa kwamandla, umvuzo, izixhobo, iirhafu kunye nezinye iinkcukacha zedatha yokubala, ulawulo, ulawulo.
1. Ngokuya ngokusetyenziswa kwenkcazo kunye neencwadana zokusebenza, ukusetyenziswa kwengqiqo kwezixhobo, ukuthintela ukulayisha ngaphezulu kusetyenziswa.
2.Thatha ukubaluleka okukhulu kuqeqesho lwangaphambi komsebenzi, utshintshana nabathengisi, ukusuka ekungazini nasekuqondeni kwaye wenze umsebenzi olungileyo wokugcinwa kwemihla ngemihla kwezixhobo.
3.Ukumgangatho osemgangathweni wenkqubo yeshishini, ukumisela indlela yokuziphatha kwabasebenzi, qinisekisa ukusebenza okuqhubekayo kwemveliso kunye nokusebenza.
4.Cacisa ukuthunyelwa kwamashishini, ukucwangciswa kombono, ukuseka inkcubeko, ukuphuhlisa iqhinga lokusebenzisana.
Ulawulo luphumelele inzuzo
Injongo yoLawulo: Inkampani ilandela ixesha elide kunye nelomeleleyo lobomi, endaweni yokuba inkulu kangakanani. Ngokuqinisekileyo yenza inkampani iqhubeke ngokuqhubekayo.
Imishini yeNkampani: IBricmaker ikubonelela ngezixhobo ezisemgangathweni ophezulu kunye nesisombululo setekhnoloji, ukukunceda ufumane izibonelelo zoqoqosho ezinkulu kwaye uqonde ixabiso lakho lobomi!
BricMaker Iimveliso zamva nje
Isisombululo seBricMaker Auto Brick Plant
Thina BricMaker ngobuchule ngodongwe (sintered) izixhobo zokwenza izitena, i-R & D, ioyile kunye nesisombululo sezityalo zezitena. Siyi-BricMaker sikunika izixhobo zekhwalithi ephezulu kunye nesisombululo setekhnoloji, ukukunceda ufumane izibonelelo zoqoqosho ezinkulu kwaye uqonde ixabiso lakho lobomi!